Samsung dia nizara Galaxy S55 7 tapitrisa manerantany | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia nizara Galaxy S55 7 tapitrisa manerantany
El Samsung Galaxy S7, ao amin'ireo kinova roa, dia iray amin'ireo mpandray anjara lehibe tamin'ny taon-dasa 2016 ary mbola mitohy izany amin'ny 2017 na dia amin'ny ambaratonga kely kokoa aza, indrindra noho ny fisehoana eo amin'ny sehatra Galaxy S8, izay nisy koa kinova roa tena hafa. Ny fahasamihafana dia tsy dia lehibe loatra ao anatiny, na dia ety ivelany sy ny vidiny aza dia nisondrotra indray, izay amin'izao fotoana izao toa tsy dia misy dikany firy amin'ny ankamaroan'ny mpividy.
Ny hafainganam-barotra amin'ny Galaxy S8 dia mihoatra ny tsara, na dia ny Galaxy S7 aza dia nametraka ny bara avo dia avo. Ary i Samsung dia nanamafy ofisialy fa hatramin'ny nanombohan'ny Galaxy S7 ary ny Galaxy S7 sisiny dia nanaparitaka maherin'ny 55 tapitrisa unit manerana izao tontolo izao.
Ireo singa 55 tapitrisa nozaraina dia nahatonga ny Galaxy S7 ho iray amin'ireo fitaovana finday be mpividy indrindra tamin'ny taona 2016, mitantana ny familiana ny sisin'ny Galaxy S7 amin'ny toerana fahefatra, ary ny Galaxy S7, amin'ny kinova mahazatra azy, amin'ny toerana fahasivy. Ny sainam-pirenen'i Samsung dia hihoaran'ny Apple iPhones samihafa amin'ny endriny samihafa ary mbola izy ireo no manjakazaka lehibe amin'ny tsena amin'ny resaka varotra.
Ankehitriny dia tsy maintsy miandry isika raha toa ka mahavita mihoatra ny tarehimarika azon'ny Galaxy S8 ny Galaxy S7 vaovao, na dia eo an-tànana aza dia toa sarotra be raha raisintsika ny fitomboan'ny vidiny ary tsy mitovy ny mampiavaka azy na ny pitsopitsony. avy amin'ny fahitana.n'ny sainam-pirenena teo aloha an'ny orinasa Koreana Tatsimo.
Mieritreritra ve ianao fa ny Galaxy S8 dia hahavita mihoatra ny tarehimarika nahatratra ilay Galaxy S7 teo alohany?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Samsung dia nizara Galaxy S55 7 tapitrisa manerantany
Ny sary voalohany nalaina niaraka tamin'ny OnePlus 5 dia voasivana
Ny serivisy fampiharana maimaimpoana an'i Amazon Undergound dia hijanona tsy hiasa intsony